काठमाडौंको स्वयम्भूबाट सोनाम तामाङ प’क्रा’उ ! श’ङ्का लागेर चेकजाँच गर्दा प्रहरी नै चकित – Online Khabar 24
काठमाडौंको स्वयम्भूबाट सोनाम तामाङ प’क्रा’उ ! श’ङ्का लागेर चेकजाँच गर्दा प्रहरी नै चकित
September 16, 2021 September 16, 2021 by admin admin
सशस्त्र प्र’हरीले काठमाडौंबाट पेस्तोल सहित एक जनालाई प’क्राउ गरेको छ ।
सश’स्त्रको विशेष व्यू’रो टोलीले बुधबार दिउँसो ४ः१० बजे काठमाडौं महानरपालिका–१६ स्थित सीतापाइलाबाट एक जनालाई प’क्राउ गरेको हो ।
प’क्राउ पर्नेमा काठमाडौं स्थित तारकेश्वर नगरपालिका–३ जितपुर फेदीका २४ वर्षीय सोनाम तामाङ रहेका छन् । सीता पाइलाको रक चिल्ली रेस्टुरेन्टबाट अ’वैध रुपमा मेड इज जर्मनी लेखिएको लोडेल भरुवा पेस्तोल लिएर हिँडिरहेको अवस्थामा प’क्राउ गरेको हो ।
सो पेस्तो’लमा लाग्ने पाँच राउन्ड गो’ली पनि सशस्त्र टोलीले पक्राउ गरेको छ । उनको साथबाट बा ४९ प ७५६५ नम्बरको मोटरसाइकल, एकथान मोवाइल र म्यागेजिन पनि बरा’मद गरेको हो । उनीमाथि थप अनुस’न्धानका लागि स’शस्त्र टोलीले स्वम्भूस्थित प्र’हरी वृत्तमा बुझाएको छ ।
यस्तै, प्र’हरीको केन्द्रीय अनुस’न्धान ब्‍यूरोले बैं’किङ क’सूर मु’द्दा’का फरार प्रतिवादीहरुलाई प’क्राउ गरेको छ । प’क्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं महानगरपालिका-१४ बल्खु बस्‍ने ४८ वर्षीय प्र’काश श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिका- २९ असन बस्‍ने ३६ वर्षीय बिनम श्रेष्ठ रहेका छन् ।
प्रकाशलाई रुपन्देहीबाट र बिनमलाई काठमाडौंको असनबाट पक्रा’उ गरेको प्रह’रीको केन्द्रीय अनुस’न्धान ब्यू’रोले जनाएको छ । उनीहरुले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानीजानी झु’क्यानमा पारी बैंक अफ काठमाण्डु र सिद्धार्थ बैकको चेक का’टेर दिएका थिए ।
दुवै जनाले पी’डितलाई आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको भन्‍ने जानी जानी झु’क्याएर बैंक अफ काठमाण्डु र सिद्धार्थ बैकका बिभिन्न रकमका चेकहरु आ-आफ्नो खाताबाट भुक्तान हुने गरी पी’डितहरूलाई दिएका थिए।
प’क्राउ परेका दुवै जनालाई फै’स’ला कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अ’दालतमा पेश गरिएको ब्‍यूरोले जनाएको छ । नुवाकोट एक्सप्रेसबाट साभार गरियको खबर
Prevबिदेशबाट फर्केर घर पुग्ने सपना देखेका उनि बिच बाटोमै अस्ताए !
nextगर्नै नहुने काम गर्दा ७ दिन जेल र १६ लाख जरिवानामा ! के गरिन त्यस्तो ?